चीनमा राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीलाई ट्याटु खोप्न प्रतिबन्ध
सुबाश लिम्बु (काठमाडौँ डेस्क ) - अाईतबार, पुस १८, २o७८ - 58
काठकाडौं । चीनले राष्ट्रिय टोलीका फुटबल खेलाडीलाई ट्याटु खोप्न प्रतिबन्ध लगाएको बीबीसीले जनाएको छ । साथै ट्याटु खोपेका खेलाडीहरूलाई त्यो हटाउन पनि निर्देशन दिएको बताइएको छ ।
चिनियाँ खेलकुद प्रशासन कार्यालयले राष्ट्रिय स्तर र युवा टोलीमा ट्याटु भएका नयाँ खेलाडीहरू राख्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको जनाएको हो । कार्यालयले समाजमा राम्रो उदाहरण प्रस्तुत गर्न यस्तो प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ ।
एक विज्ञप्तिमा चीनको जनरल एड्मिनिस्ट्रेसन अफ स्पोर्टसले ट्याटु भएका राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई ट्याटु हटाउन सुझाव दिइएको जनाएको छ । ‘विशेष अवस्थामा प्रशिक्षण र प्रतियोगिताको समयमा ट्याटु छोप्नु पर्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
चीनले सन् २०१८ देखि नै टिभीमा ट्याटु देखिनबाट रोक्न नयाँ निर्देशनहरू जारी गर्न थालेको हो । त्यसयता केही व्यावसायिक खेलाडीहरूले ट्याटु छोप्न लामो बाहुला भएको जर्सी प्रयोग गरिरहेका छन् ।
किन प्रतिबन्ध गरियो?
चिनियाँ संस्कृतिमा ट्याटुलाई राम्रो मानिन्न । विगतमा ट्याटुलाई अपराधीहरूको चिन्ह मानिन्थ्यो भने पूर्वी एशियामा यसलाई साङ्गठनिक अपराध समूहहरूसँग जोडिन्छ । चीनको सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टीले ट्याटुलाई राम्रो मान्दैन तर त्यहाँ हालैका दिनहरूमा ट्याटु लोकप्रिय हुन थालेको छ ।
यो वर्षको सुरुमा चीनको प्रसारण निकायले अस्वास्थ्य सामग्रीमाथि कडाइ गर्ने जनाएको थियो । टेलिभिजन र इन्टरनेटमा खेल व्यक्तित्वहरूलाई ट्याटु र पुरुषहरूले कपाल बाँधेर आउन मनाही गरिएको थियो । केही कार्यक्रममा ट्याटु र पुरुष खेलाडीले बाटेको कपाललाई नचिनेर बनाइएको थियो ।
गत डिसेम्बरमा महिला विश्वविद्यालयको एउटा फुटबल खेल खेलाडीहरूको रङ्गाइएको कपालका कारण रद्द गरिएको थियो । सो खेलका आयोजक न्याश्नल युथ क्याम्पस फुटबल लिगले त्यति बेला एक विज्ञप्तिमा लेखेको थियोः ‘सबै स्तरका खेलाडीहरूले ट्याटु खोप्न, कपाल रङ्गाउन, वा अन्य कुनै सामग्री लगाउन पाइँदैन, अन्यथा उनीहरू प्रतियोगिताका लागि अयोग्य हुन्छन् ।’
अाईतबार, पुस १८, २o७८
रङ्गशालामा भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा ६ जनाको मुत्यु
विश्व कप छनोटका लागि सन्दीप लामिछानेको कप्तानीमा राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको घोषणा
एपिएफ प्रधानमन्त्री कप टी–२० क्रिकेटको च्याम्पियन
नोभाक जोकोभिच अस्ट्रेलिया निर्वासन विरुद्धको लडाइमा पराजित, भिसा किन रद्द भयो ?
सबै कुरा बिर्सेर देशका लागि खेल्ने हो: मल्ल
मङ्गलबार, पुस २o, २o७८
मरिससविरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अल्मुताईरीले बोलाए ३४ खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा
सोमबार, पुस १९, २o७८
राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण सुरू
भलिबल विजेता खेलाडीलाई जनही ५ लाख दिने सरकारको निर्णय
बुधबार, पुस १४, २o७८